hollywood | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More...
हलिउड चलचित्र ‘अवतार २’२०२१ को डिसेम्बरमा रिलिज हुने
जेम्स क्यामरुनद्वारा निर्देशित बलकबल्स्टर हलिउड चलचित्र ‘अवतार’को सिक्वेल ‘अवतार २’को प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । सन् २०२० को डिसेम्बरमा रिलिज हुने भनिएको चलचित्र सन् २०२१ को डिसेम्बरमा सरेको छ ।
यसैगरी अवतार ३ सन् २०२३ को डिसेम्बर, अवतार ४ सन् २०२५ को डिसेम्बरमा र अवतार ५ सन् २०२७ को डिसेम्बरमा रिलिज हुने आशा गरिएको छ । डिज्ने र फक्स मर्ज हुँदाको शिकार अवतार भएको हो । विश्व प्रतीक्षित सिनेमा अवतारकै सिक्वेल रिलिजमा ढिलाइ भइरहँदा डिज्नेसँग यस्ता कति सिनेमाको सिक्वेल पाइपलाइनमा छन् त भन्ने चासो सुरु भएको हलिउड मिडियाले जनाएका छन् ।
सन २००९ मा रिलिज भएको बलकबल्स्टर हलिउड सिनेमा ‘अवतार’ बक्स अफिसमाअहिले सम्मकै सबै भन्दा बढी कमाई गरेको थियो ।
हलिउडका चर्चित गायक पेबो ब्रायसनलाई हृदयघात
हलिउडका चर्चित गायक पेबो ब्रायसनलाई हृदयघात भएको छ । उनको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
ब्रायसनका प्रवक्ताको अनुसार उनको अवस्था अहिले खतरामुक्त रहेको छ । ब्रायसनले डिज्नीको हिट फिल्ममा गाएको ‘ब्यूटी एण्ड द बीस्ट’ र ‘अलादीन’ गीत लोकप्रिय छन् ।
प्रवक्ताले ‘पीपल म्यागाजिन’लाई बताएअनुसार उनलाई अहिले होस आइसकेको छ । प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘उनको अवस्था अहिले सामान्य नै छ । हामी साथीभाई र प्रशंसकको प्रार्थनाको सम्मन गछौँ ।’
‘एभेन्जर्स एन्डगेम’ हेरेर चीनकी एक युवतीको स्वास्थ्य विग्रदा अस्पताल भर्ना
मार्भलको सुपरहिरो सिरिज ‘एभेन्जर्स एन्डगेम’ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म मध्येको एक हो। यो फिल्म ‘एभेन्जर’ सिरिजको अन्तिम फिल्म हो। हलिउडको यो फिल्म सिरिज प्रति यति क्रेज छ की सिरिज सकिनाले कतिपय फ्यानहरु बेहाल भएका छन्। यो सिरिज सकिदाँको दुःखमा चीनकी एक युवतीको स्वास्थ्य विग्रदा अस्पताल भर्ना गर्नु परेको खबर आएका छन्।
२१ वर्षकी यी युवती फिल्म हेर्न हल पुगिन। फिल्म हेरिन, सकिएपछि दुःखी भइ, अनि रुन थालिन। घण्टौंसम्म रोइन जसले उनको स्वास्थ्य अवस्था विग्रियो। अस्पताल पुर्याउँदा उनको हात खुट्टा सुन्निसकेको थियो अनि स्वास लिनमा कठिनाइ थियो। डाक्टरले उनलाइ अक्सिजन र सान्तवना दिनुपर्यो।
सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म
यो फिल्मले चीनमा मात्र ५३० करोड (रुपैयाँ) बराबरको कमाइ गरेको छ। ३ घण्टा लामो यो फिल्म विश्वकै सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने फिल्ममा गनिएको छ।
यहि शुक्रबार (२६ अप्रिल)मा रिलिज भएको यो फिल्मले शनिबारसम्म (२ दिनमा) विश्वभर ६० मिलियल डलर (करिब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ) कमाइ गरिसकेको छ। यो फिल्म सबैभन्दा छिटो १ बलियल डलर कमाउने फिल्म बन्ने अनुमान गरिएको छ।
एभेन्जर फिल्मको मज्जा लिन २१ वटा फिल्म हेर्नुपर्ने !
एभेन्जर सिरिजमा ४ वटा फिल्म छन्। सन् २०१२ मा रिलिज भएको ‘द एभेन्जर्स’ यो सिरिजको पहिलो फिल्म हो। त्यसपश्चात सन् २०१५ मा ”एभेन्जर्सः एज अफ अल्ट्रन’, २०१८ मा ‘एभेन्जरः इन्फिनिटी वार’, र यसको चौथो र अन्तिम फिल्म ‘एभेन्जर्सः एन्डगेम’ हो।
तर एभेन्जर सिरिजका फिल्महरुको मज्जा लिन मार्भल स्टुडियोका अरु सुपरहिरो फिल्म हर्नु पर्छ। एभेन्जर सिरिजका फिल्ममा ‘आइरम्यान’, ‘स्पाइरडम्याड, ‘हल्क’, ‘क्याप्टेन अमेरिका’, ‘थोर’, आदी पात्रहरु छन्। यी पात्रहरुका आफ्नै फिल्महरु छन्। मार्भलका सम्पूर्ण सुपरहिरो फिल्मको लिस्ट यस्तो छ।
हलिउड स्टार निकोलस केजले बिवाह गरेको चार दिनमै डिभोर्स गरे
हलिउड स्टार निकोलस केजले बिवाह गरेको चार दिनमै डिभोर्स गरेका छन ।निकोलस केजले केही दिन पहिले मात्र मेकअप आर्टिस्ट एरिका कोइकसँग विवाह गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा निकोलसका फ्यानले किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, निकोलस मौन छन् । यति चाँडो विवाह तोडेको समाचार आए पनि निकोलस र एरिका दुवैले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
पश्चिमी मिडियाहरूका अनुसार दुवैले गत शनिबार विवाह दर्ताका लागि निवेदन पेस गरेका थिए र त्यही दिन दर्ता पनि भएको थियो । ५५ वर्षीय निकोलसले गत बुधबार नै सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।
गायक जस्टिन बिबर पिता बन्दै
गायक जस्टिन बिबर लगातार जसो नै चर्चामा रहन्छन् । पछिल्ला दिनमा उनी कहिले विवाहका कारणले त कहिले श्रीमतीसँको झगडाको खबरले मिडियामा छाउने गरेका छन् । तर, अहिले भने उनी पिता बन्न लागेको चर्चा चलेको छ । यसबारे जस्टिनले इन्स्टाग्राममा लामो पोस्ट गरेर संकेत दिएका छन् ।
“ग्रीन बूक” ले जित्यो ओस्कार अवार्ड
अमेरिकाको लस एन्जलसमा सोमबार बिहान भएको ९१ औँ संस्करणको ओस्कार अवार्ड ग्रीन बुकले उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड जितेको हो । अभिनेता रामी मालेकले यस पटकको ओस्कार अवार्डमा बेस्ट एक्टरको अवार्ड हात पारेका छन् ।
उत्कृष्ट अभिनेताकाे अवार्ड लिँदै रामी मालेक
चलचित्र ‘बोहेमियन राप्सोडी’ मा फ्रेडी मर्करीको भूमिकाका लागि मालेकले ९१औँ संस्करणको एकेडेमी अवार्डमा उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड हात पारेका हुन् ।
मालेकले ‘भाइस’ मा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डिक चेनीको भूमिकामा देखिएका क्रिस्टियन बेल र ‘अ स्टार इज बर्न’ मा ज्याक मेनको भूमिकाका देखिएका ब्राड्ले कूपरलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जितेका हुन् ।
ग्रीन बुक चलचित्रका लागि ओस्कर पुरस्कार लिँदै निर्देशक पीटर फेरेली
‘बोहेमियन राप्सोडी’ ब्रिटिस रकब्यान्ड ‘क्वीन’ का लिड सिंगर फ्रेडी मर्करीको जीवनमा आधारित चलचित्र हो । फ्रेडी मर्करीको सन् १९९१ मा एड्ससँग सम्बन्धित रोगका कारण निधन भएको थियो ।
उत्कृष्ट निर्देशककाे ओस्कर पुरस्कार लिँदै अल्फान्साे क्युराेन
बोहेमियन राप्सोडीका अलावा रामी मालेक टेलिभिजन शृंखला ‘मिस्टर रोबोट’ का कारण पनि चर्चित छन् । त्यस्तै ‘रोमा’ ले सर्वोत्कृष्ट विदेशी भाषाको फिल्म तथा सर्वोत्कृष्ट सिनेमाटोग्राफीको अवार्ड जितेको छ ।
अल्फान्सो क्वारोनको लेखन र निर्देशन रहेको मेक्सिकन भाषाको यो श्यामश्वेत चलचित्रमा सन् १९७० को दशकको मध्यम वर्गीय गृहिणीको कथा समेटिएको छ ।
उत्कृष्ट अभिनेतृकाे ओस्कर पुरस्कार लिँदै ओलिभिया काेलम्यान
बेलायती अभिनेत्री ओलिभिया कोलमेनले ‘द फेभरेट’ का लागि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड हात पारिन् ।
उत्कृष्ट ओरिजिनल गीतका पुरस्कार लिँदै गायिका लेडी गागा
कसले के जिते ?
उत्कृष्ट चलचित्र : ग्रीन बुक
उत्कृष्ट निर्देशक : अलफान्सो क्यूरोन (रोमा)
उत्कृष्ट अभिनेत्री : रामी मालेक
उत्कृष्ट अभिनेता : ओलिभिया कोलम्यान
उत्कृष्ट सहअभिनेत्री : रेजिना किंग
उत्कृष्ट सहअभिनेता : माहेरशला अली
उत्कृष्ट सिनेमेटोग्राफी : रोमा, अल्फान्सो क्युरोन
उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म : स्पाइडर म्यान
उत्कृष्ट ओरिजिनल स्क्रिनप्ले : ग्रीन बुक
उत्कृष्ट एडेप्टेड स्क्रिनप्ले : ब्ल्याकक्लान्सम्यान
उत्कृष्ट ओरिजनल स्कोर : ब्ल्याक प्यान्थर
उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिचर : फ्री सोलो
उत्कृष्ट शर्ट डकुमेन्ट्री : पिरियड एण्ड अफ सेन्टेन्स
उत्कृष्ट लाइव एक्सन सर्ट : स्किन
उत्कृष्ट एनिमेटेड सर्ट : बाओ
उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइन : ब्ल्याक प्यान्थर
उत्कृष्ट कस्ट्युम डिजाइन : ब्ल्याक प्यान्थर
उत्कृष्ट हेयर एण्ड मेकअप : वाइस
उत्कृष्ट साउण्ड एडिटिङ : बोहेमियन राप्सोडी
उत्कृष्ट साउण्ड मिक्सिङ : बोहेमियन राप्सोडी
उत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट : फर्स्ट म्यान
उत्कृष्ट सम्पादन : बोहेमियन राप्सोडी
उत्कृष्ट ओरिजनल सङ : श्यालो
इटालियन डायरेक्टर बर्नार्डो बर्टोलूसीको निधन
लास्ट टेंगो इन पेरिस जस्ता चर्चित फिल्म बनाउन सफल इटालियन डायरेक्टर बर्नार्डो बर्टोलूसीको निधन भएको छ। उनको ७७ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो।
उनी क्यान्सरका कारण करिब एक दशकदेखि व्हलचेयरमा जीवन विताइरहेका थिए। बर्नार्डोले इटालियन फिल्ममा ६० दशकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने निर्देशकका रुपमा परिचत छन्। पछिल्लो पटक उनले सन् १९८७ मा एम्परर नामको एक फिल्म बनाएका थिए।
यो फिल्म विश्वभर निकै प्रसिद्ध भएको थियो। यस फिल्मलाई ९ ओक्सर अवार्ड प्राप्त भएको थियो।
निकै चर्चित गीत ‘गङनम स्टाइल’का गायक पीएसवाई नेपाल आउदै
निकै चर्चित गीत ‘गङनम स्टाइल’का गायक पीएसवाई (पार्क जेई साङ) कन्सर्टको लागि नेपाल आउने भएका छन् ।रेकर्ड ब्रेकर गीत ‘गङनम स्टाइल’का गायक पीएसवाई नेपाल र कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ४५ वर्ष पुगेको अवसरमा कोरियाली राजदुतावासले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा सहभागीहुन आउन लागेका हुन् ।
कोरियामा उनी हाँस्य स्टेज प्रस्तुती र भिडियोबाट चर्चित छन् भने अन्तर्राष्ट्रीय रुपमा गङनम स्टाइल गीत तथा भिडियोले उनलाई चर्चित बनाएको छ । १५ जुलाई २०१२मा सार्वजनिक भएको उक्त गीतको भिडियो २१ डिसेम्बर २०१२मा आएर यूट्युबको इतिहासमै पहिलोपटक एक अर्ब भ्युज बनाउन सफल भयो ।
पीएसवाई साउथ कोरियन गायक, र्यापर, रचनाकार पनि हुन् ।उनले डिसेम्बर १५ तारिखमा खुमलटारस्थित सातदोबाटोको रेडियो ग्राउण्डमा हुने ‘पीएसवाई विथ के पप लाइभ इन नेपाल’ कन्सर्टमा आफनो प्रस्तुती देखाउने छन् ।
कार्यक्रममा पीएसवाईलाई नेपालका चर्चित पप गायक दीपक बजार्चायले पनि साथ दिने छन् । पछिल्लो समयमा उनको ‘मनमगन’ गीतले बजार निकै तताइरहेको छ । यो गीत नेपाली भाषामा मात्र नभई हिन्दी भाषामा समेत रिमेक गरिएको छ ।कन्सर्टमा बज्राचार्यले नेपाली भेषभुषा र नेपाली मौलिक बाजाहरुलाई समेटेर आफ्नो ब्याण्ड सहितको प्रस्तुती दिनेछन् ।
फिल्म सुटिङ्गमा ट्यांकले कुल्चिएर द्वन्द्व निर्देशकको मृत्यु
रुसमा द्वितीय विश्वयुद्धमाथि चलचित्र छायांकनको क्रममा भएको दुर्घटनामा द्वन्द्व-निर्देशकको ज्यान गएको छ । द्वितीय विश्वयुद्धको विषयवस्तुमा निर्माणाधीन चलचित्र ‘इलिनस्काई फ्रन्टियर’को सुटिङ्गको क्रममा ट्यांकले किचेर प्रसिद्ध स्टन्टम्यान ओलेग सिल्किनको ज्यान गएको हो ।
३१ वर्षीय सिल्किनलाई चलचित्रमा नाजीहरूको भनिएको ट्यांकले कुल्चिएको हो । रिपोर्ट अनुसार ट्यांक सिल्किनभएको ठाउँभन्दा १० फीट टाढा रोकिनु पर्ने थियो तर उक्त ट्यांक ती कलाकारमाथि चढेपछि उक्त दुर्घटना भएको थियो ।
यस चलचित्रमा द्वितीय विश्व युद्धमा १९४१ को एउटा लडाईमा आधारित रहेको छ । उक्त समय हिटलरको सेनाले रुसको लालसेनामाथि आक्रमण गरेको थियो ।३ सेप्टेम्बर १९३९ मा जर्मनीले पोल्याण्डमाथि आक्रमण गरेपछि द्वितीय विश्वयुद्धको विधिवत सुरुवात भएको थियो ।
इलिनस्काई फ्रन्टियर चलचित्रको सुटिङ्ग राजधानी मस्कोभन्दा २४० किलोमिटर टाढा हुँदैछ । घटनास्थल टाढा भएकाले एम्बुलेन्स त्यहाँ पुग्नु पहिले नै सिल्किनको मृत्यु भैसकेको बताइएको छ । सरकारले उक्त घटनाको छानबिन सुरु गरिसकेको छ र रसियन इन्भेस्टिगेसन कमिटीको टोली तत्काल घटनास्थल पुगिसकेको बताइएको छ ।
चलचित्र ‘द म्यान फ्रम काठमाण्डू’को अफिसियल ट्रेलर र पोस्टर सार्वजनिक (भिडियो)
चलचित्र ‘द म्यान फ्रम काठमाण्डू’को अफिसियल ट्रेलर र पोस्टर सार्वजनिक भएको छ ।नेपालमा बनेको उक्त पहिलो अंग्रेजी सिनेमाको सुट हलिउड नगरी लस–एन्जल्ससहित काठमाडौंमा गरिएको थियो ।
आइतबार अमेरिकाको सिकागोमा आयोजित नेपाली नेसनल कन्भेन्सन २०१८ समारोहमा ट्रेलर–पोस्टर लन्च गरियो । थिम पोतिएको पोस्टरमा फिल्मका एक मुख्य पात्रको अनुहारलाई मुकुन्डोले छोपिएको छ । पृष्ठभूमिमा नेपाली ऐतिहासिक सम्पदा देख्न सकिन्छ । ट्रेलर आकर्षक लाग्छ ।
पाँच करोड लगानीमा निर्माण भएको फिल्म ‘द म्यान फ्रम काठमाण्डू’को निर्माताले हलिउड, बलिउड र नेपालमा एकैसाथ फिल्म रिलिज गर्ने तयारीमा आफूहरु जुटेको बताए ।
नेपाली कथा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन र सुनाउन आफूहरु उत्साहित रहेको उनको कथन छ । भारतीय, पाकिस्तानी र केही हलिउड कम्पनीले समेत नेपालको पहिलो अंग्रेजी फिल्मको वितरणमा चासो व्यक्त गरेको उनले जनाए ।
पेमा धोन्डुप निर्देशक हुन् । उनी निर्देशित फिल्म ‘वी आर नो मंक्स’ (२००४)ले सुखद समिक्षा प्राप्त गरेको थियो । तिब्बती शरणार्थी अभिभावकको रुपमा जोमसोममा हुर्किएका पेमाले त्यहाँ छँदै आफूमा कथाको विकास भएको अनुभव सुनाए ।
फिल्मले अतिवादी सोच भएको एक हिन्दु–मुस्लिम युवकको मनोवैज्ञानिक र भौतिक यात्राको कथा भन्छ । निर्देशक धोन्डुपले भने, ‘यसले धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक समानताको समर्थन गर्दै अतिवादको विरोध गर्छ ।’
‘सीएनएनमा एउटा आर्टिकल पढेपछि कथा जन्मिएको हो । यसबारे दुईवर्ष रिसर्च गरेँ । अनि त्यसमा नेपाली कला, संस्कृतिलाई मिश्रण गरेर फिल्मको कथा बुनिएको हो’ धोन्डुपले भने ।
फिल्ममा अमेरिकी अभिनेता जोसे म्यानुअल, बलिउड अभिनेता गुल्सन ग्रोवर, पाकिस्तानी अभिनेता हमिद शेख, नीर शाह, आना शर्मा, शिशिर बाङ्देल, कर्म शाक्य, आमिर गौतम लगायतको अभिनय छ । कार्लोस मेडिनाको छायांकन, एरिक कारखेकको सम्पादन, हरि पिलाइको ध्वनी, जोसे म्यानुअलको स्टन्ट कोरियोग्राफी छ ।